Fampitahana ireo mpanadio banga amin'ny boaty vovoka - SmartMe
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny am-polony taona maro, ireo mpanadio banga dia nahavita fanavaozana ny fanaraha-maso avy amin'ny bokotra ara-batana ka hatrany amin'ny fanaraha-maso app, manomboka amin'ny fifandonana tsy nahy ka hatramin'ny fanombanana tsara ny fisorohana ny sakana, manomboka amin'ny fandidiana an-tsokosoko ka hatramin'ny fandaminana ny lalam-be. Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny teknolojia, niditra tao amin'ny fiainan'ny olona ireo mpanadio banga marani-tsaina ary lasa mpanampy tsara amin'ny fiainany.
Na izany aza, rehefa nitombo ny habetsaky ny fampiasana dia nanjary olana ho an'ny mpampiasa ny fanadiovana matetika ireo boaty vovoka. Noho izany, manomboka mipoitra ny teknolojia fanangonana vovoka. Aorian'ny fanadiovana dia miverina ho azy any amin'ny base base ilay mpanadio tsy misy fitsabahan'ny mpampiasa, ary ny fako ao anaty fitoeram-pako dia atsofoka ao anaty fitoeram-pako, izay mamaha ny olan'ny mpampiasa amin'ny fanadiovana matetika ny fitoeram-pako.
Amin'izao fotoana izao, ny mpanadio banga marani-tsaina indrindra amin'ity karazana eny an-tsena ity dia iRobot i7 +, Ecovacs T8 AIVI ary Roidmi EVE PLUS.
Ny herin'ny suction an'ny mpanadio banga, ny borosy lehibe ary ny maodelin'ny mopping dia misy fiantraikany amin'ny herin'ny fanadiovana.
1, Suction: Avy amin'ny angona: Roidmi EVE Plus (2700pa)> iRobot i7 + (2200pa)> Ecovacs T8 AIVI (1500pa).
2, borosy lehibe: Ho fanampin'ny iRobot i7 +, ny vokatra telo hafa dia mampiasa borosy iray. Ny borosy roller dia manana endrika miovaova izay afaka mihodina midina manadio ny vovoka. Ny iRobot i7 + dia mampiasa borosy fingotra mitambatra roa izay afaka mifikitra mafy amin'ny tany sy madio.
3, fomba fandefasana moka: Roidmi EVE Plus dia mandray ny fomba Y-type mopping dingana telo, ny fanadiovana lalina ary ny fitoeran-drano elektronika dia afaka manitsy tsara ny habetsaky ny famoahana rano nefa tsy mamela tasy; Ny Ecovacs T8 AIVI dia manana fitoeran-drano roa ary maody mopping roa izay azo safidiana arakaraka ny fepetra manokana. Ny maody fikororohana matetika dia manome effets fanadiovana tsara ho an'ny tasy mafy loha, fa ny fomba fanetsehana koa dia mety miteraka tasy amin'ny rano ary tsy mety amin'ny fanadiovana gorodona hazo; Ny iRobot i7 + dia tsy manana asa fanadiovana gorodona, izay tokony hodinihina rehefa misafidy.
Ny androm-piainan'ny mpanadio banga dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny asany. Ny androm-piainany dia:
Roid Mi EVE Plus (250 min)> Ecovacs T8 AIVI (175 min)> iRobot i7 + (75 mn). Ny faharetan'ny Roidmi EVE Plus dia miavaka, ary ny androm-piainan'ny 250 minitra dia ahafahanao manadio 250 metatra toradroa indray mandeha.
Fahaiza-manao drafitra / fivezivezena
Ny fahaizan'ny drafitra dia mamaritra raha afaka manadio samirery ny fanadiovan-drivotra. Ireo mpanadio banga telo dia mampiasa teknolojia fitetezana samihafa. Roidmi EVE Plus mampiasa teknolojia laser 4.0 SLAM ary fitaovana miaraka amin'ny rafitra sari-tany Roidmi mba hahatonga ny drafitra ankapobeny ho marina kokoa; iRobot i7 + dia mampiasa ny haitao Visual SLAM hahafehy ny firafitry ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fanangonana angon-drakitra manasongadina, famoronana mari-toerana hita maso sy sarintany fandaminana; Ecovacs T8 AIVI Ny fampiasana teknolojia SLAM laser + vision, ny teknolojia mifameno dia manatsara ny fahafaha-manao drafitra fitetezana.
Fampiasana tobim-panangonana vovoka
Ireo mpanadio banga telo etsy ambony dia manana fitsipika mitovy amin'izany momba ny fiasa sy ny voka-dratsy fanangonana. Aorian'ny fanadiovana dia miverina any amin'ny gara ilay mpanadio vovoka hanombohana ny asan'ny fanangonana vovoka ary hitsoka ny fako avy ao anaty fitoeram-bovoka ao anaty kitapo vovoka noho ny herin'ny suction avo. Anisan'izany, Roidmi EVE Plus ihany no manana rafitra bacteriostasis sy deodorization. Aorian'ny fanangonana vovoka, dia hihazakazaka ny programa sterilisation ozone sy ny deodorization, izay haharitra 30 minitra hisorohana ny fandotoana faharoa ateraky ny fitomboan'ny bakteria; Ankoatr'izay, ny tobim-panangonana vovoka dia manana efijery LED, izay mora ho an'ny mpampiasa ny manamarina ny satan'ny fiampangana, ny toetoetran'ny fanamorana, ny toetoetran'ny vovoka, sns.
Mikasika ny fanavaozana ny teknolojia, ny borosy roa ao amin'ny iRobot i7 + dia tsy isalasalana fa manaitra ny mpanjifa; ary amin'ny lafiny fahaiza-manao amin'ny fitaterana dia manambatra ny teknolojia SLAM roa ny Ecovacs T8 AIVI mba hahatonga ny mpanadio banga ho tsara kokoa amin'ny fisorohana ireo sakana, fa misy kosa ny olona manontany tena ny amin'ny mety hisian'ny fivoahan'ny fiainana manokana amin'ny fakantsary?
Avy amin'ny vidiny, ny iRobot i7 + $ 798, ny Dust Collector Station dia azo vidiana amin'ny $ 249; Ecovacs T8 AIVI $ 799,99, ny Station Dedusting koa 249,99 $; Toerana fitrandrahana vovoka Roidmi EVE PLUS + mitentina 400 $ eo ho eo. Amin'ny ankapobeny, ny fahombiazan'ny Roidmi EVE Plus dia tsara. Ny tobin'ny fitrandrahana vovoka dia mihevitra ny zavatra niainan'ny mpampiasa ary mora kokoa ny vidiny. Tsy isalasalana fa io no vokatra mahasoa indrindra amin'ireo mpanadio banga voalaza.
Niara-niasa tamin'ny ROIDMI ny lahatsoratra.
iRobot dia manolotra ny andiany Roomba i3 + vaovao!
14 Janoary 2021
Ny mpanafatra sy mpaninjara ny iRobot any Polonina - DLF - dia nanambara ny fanombohana andiana robot fanadiovana banga Roomba i3 +. Ireo maodely vaovao dia hanitatra ny tsipika vokatra iRobot. "Ny fomba fanavaozana ny fanadiovana dia hatrizay ary ho ...
Iray tapitrisa iRobots any Polonina
fahamasinana madio, iRobot, roomba
Manerantany, ny fanadiovana robots dia iray amin'ireo sokajy famokarana fitaovana maoderina tena mandroso indrindra. Manaraka an'io fironana io ny poloney, manolo an-tsitrapo ny mpanadio tsiranoka nentim-paharazana amin'ny robot. Ny orinasa iRobot, izay miaraka amin'ny mpanafatra DLF - dia nanambara ...
iRobot dia manolotra ny Genius iRobot
26 Aogositra 2020
iRobot dia manolotra ny Platinum Genius iRobot. Izy io dia mampiditra karazana endri-javatra vaovao vaovao ho an'ny robots robots Roomba sy robots fiaramanidina Braava, izay nasiana modul WiFi. iRobot Genius dia midika hoe bebe kokoa ny haavon'ny fampidirana manokana sy ny fifehezana bebe kokoa ...
iRobot dia mampiseho indray ny Roomba artista. Projet Anna Halarewicz x iRobot
21 Aogositra 2020
Manohy ny fampifangaroana ny kanto sy ny teknolojia, iRobot Polska, miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanao sary fanta-daza indrindra any Polonina, dia manolotra ny tetikasa Anna Halarewicz x iRobot. iRobot sy DLF - ilay mpandraharaha poloney mpandrafitra ny marika - dia nanapa-kevitra ny hanohy ny fampielezan-kevitra tamin'ny taona lasa ...
New robot Roomba 600!
Ny tolotra poloney an'ny marika iRobot dia misy modely andian-dahatsoratra vaovao Roomba 600. Ny miafina ny teknolojia mivoatra dia nafenina ao amin'ny vatana, izay novolavolaina tamin'ny fomba maoderina. iRobot any Poland dia manolotra modely vaovao telo ...
"Moxie no anarako!" Robot an'ny CTO iRobot teo aloha
Robot Moxie noforonina noho ny orinasam-pifandraisana Emodied vaovao. Mifantoka amin'ny fanabeazana sy fampandrosoana ny ankizy ny fitaovana, ary ny teny filamatra izay mitarika ny famoronana dia: "Satria ny fahaizana malefaka dia fahaizana ilaina". Fidirana tsena ho an'ny robot Moxie ...
iRobot dia nampiato ny tetika hamoahana ny robot fanapahana azy ireo voalohany
Husqvarna, iRobot, robot manapaka, Terra
Raha nanantena ianao fa tsy ho ela dia ho afaka manondraka ny ahitra miaraka amina mpanamory baomba vaovao avy amin'ny iRobot izahay, indrisy, ratsy laza ho anao. Mifandraika amin'ny Pandemaly, iRobot dia manemotra ny laharam-pahamehana farany ...